Khadka duulimaadka Muqdisho ee shirkada diyaaradaha Turkish Airlines & qiimaha – SBC
Khadka duulimaadka Muqdisho ee shirkada diyaaradaha Turkish Airlines & qiimaha
Posted by editor on March 6, 2012 Comments
Warbaahinta SBC ayaa heshay nuqul ka mid document cadeynaya khadka duulimaad ee shirkada diyaaradaha Turkish Airlines ku tagayo magaalada magaalada Muqdisho kaasi oo noqonaya todobaadkii laba maalmood oo kala ah Arbcada & Jimcaha.
Khadkan duulimaad oo ah kii ugu horeeyey ee heer caalami ah oo isku xira Muqdisho iyo dunida inteeda kale marka laga tago diyaaradaha ay adeegsadaan shirkadaha Soomaalida oo hawlo weyn oo amaan mudan qabtey sanadihii la soo dhaafay ee dalku uu ku jiray bururka iyo nidaam la’aanta, inkastoo heerka adeegooduu uu ahaa mid aad uga hooseeya nidaamyada duulimaad ee caalamiga ah.
Duulimaadka Turkish Airlines ee Muqdisho wuxuu ka bilaamanayaa Talaadada magaalada Istabul (Turkey) wuxuu transit ku ahaanayaa Khartum (Sudan) maalinmada Arbacada isla maalintaasi Arbacada Muqdisho (Somalia) ayuu tagayaa kana soo laabanayaa, wuxuuna dib ugu laabanayaa Istanbul ee isla maalintaasi Arbacada.
Duulimaadka labaad wuxuu ka baxayaa Istanbul (Turkey) maalinta Khamiista, Jimcada wuxuu Transit ku ahaanaya Khartum Sudan, isla maalintaasi Jimcada wuxuu Transit tagayaa Muqdisho (Somalia), wuxuuna dib ugu laabanayaa Istanbul maalintaasi Jimcaha.
Sidaasi ayuu ku noqonayaa duulimaadkaasi todobaadkii laba jeer oo uu tagayo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, iyadoo shirkadu adeegsanayo diyaaradaha ugu casrisan dunida.
Qiimaha halkii tigidka sii socod iyo soo socod (go and back) ama round-trip ee Istanbul-Khartum-Muqdisho Muqdisho-Khartum-Istanbul ayaa noqoanaya 465 Euro oo ay ku jiraan dhamaan qaraashadka oo dhan sida canshuurta lacagtaasi oo u dhiganta doolar $ 550, qiimahan oo ah inta ka horeysa 7-da bisha April.
Website-ka shirkada diyaaradaha ee Turkish Airlines qaynta Online booking-ka marka aad doorato duulimaadka Mogadisho, Somalia Aadan Adde International Airport si fudud ayaad uga goosan kartaa tigidha duulumaadka diyaaradaha si la mid ah magaalooyinka kale ee caalamka taasi muujinaysa in duulimaadkaasi uu si buuxda u bilowday.
Shirkada diyaaradaha Turkisha Airlines waxaa la aasaasay 20-kii bishii May sanadkii 1933, waxaana ay ku hawlgashaa 162 diyaaradood oo qaarkood yihiin kuwii ugu dambeeyey ee dunida laga isticmaalo, waxaana haatan u dalban ama u qorsheysan 17 diyaaradood oo dheeraad ah.
Hadii doonayso inaad booking ama reservation sameyso riix halkan
Si aad u ogaato macluumaadka rasmiga ah ee shirkada Turkish Airlines ee duulimaadka Muqdisho halkan riix